Fironana momba ny marketing amin'ny atiny B2B | Martech Zone
Fironana momba ny marketing amin'ny atiny B2B
Alarobia, Septambra 22, 2021 Alarobia, Septambra 22, 2021 Douglas Karr
Ny areti-mifindra dia nanelingelina ny fironana amin'ny varotra mpanjifa satria nanitsy ny hetsika nataon'ny governemanta ny orinasa mba hanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19 haingana. Rehefa nakatona ny kaonferansa dia nivadika an-tserasera ny mpividy B2B hahazoana atiny sy loharanon-karena virtoaly hanampiana azy ireo amin'ny dingana amin'ny dian'ny mpividy B2B.
Ny ekipa ao amin'ny Digital Marketing Philippines dia nametraka ity sary ity, Fironana momba ny marketing amin'ny atiny B2B amin'ny taona 2021 izay mitarika fironana 7 an-trano afovoan'ny fandraisan'ny mpivarotra atiny B2B ny fiovan'ny indostria sy ny fitondran-tena:
Nanjary lasibatra bebe kokoa ny atiny - Ny fizarazarana sy ny maha-izy azy dia nanjary zava-dehibe indrindra satria ny mpivarotra dia mitady hanome traikefa kendrena. Ny fitantanana atiny miaraka amin'ireo sehatra marketing automatisation sy intelligence intelligence dia manome ny teknolojia ilaina hamokarana sy handrefesana ireo traikefa kendrena ireo.
Nanjary nifandray sy niaina traikefa bebe kokoa ny atiny - feo, horonan-tsary, sarimiaina, calculatera, gamification, augmented reality, ary virtual reality dia manatsara ny traikefan'ny mpividy B2B… manampy azy ireo hiova fo.
Fanjifana votoaty amin'ny alàlan'ny finday aloha - Tsy ampy ny manangana tranokala misy valiny azo jerena amin'ny fitaovana finday aorian'ny fananganana ny biraonao. Mihamaro hatrany ny cmopanies izay manova mavitrika ny atiny sy ny zavatra entin'izy ireo ho an'ny mpitsidika finday.
Marketing amin'ny atiny amin'ny fantsona marobe - Ny fihaonana amin'ireo mpitsidika izay misy azy ireo dia manjary manakiana satria ny mpividy B2B dia manana loharanon-karena tsy manam-petra. Raha ao amin'ny fantsona sosialy ny mpividy anao dia ilaina ny mifanerasera amin'izy ireo. Raha eo am-peo izy ireo (oh: podcast), ilaina ny manome ny fampahalalana. Raha eo amin'ny horonan-tsary izy ireo dia mety mila ao amin'ny YouTube ihany koa ny atiny.
Varotra marketing atolotry ny fahefana topical - Ny onjam-peony tsy misy farany dia tsy mahomby satria mijery ny manangana a ny orinasa tranomboky atiny feno sy feno izay manome atiny manam-pahaizana, manam-pahefana ary mendri-pitokisana ho an'ny mpividy mety hitrandraka vahaolana amin'ny olan'ny orinasany.
Votoatin'ny mpiara-miasa amin'ny marketing amin'ny atiny - Ny fampiasana fifandraisana sy fampiroboroboana ny atiny miaraka amin'ireo mpijery kendrena mitovy dia fomba iray mahomby sy mahomby amin'ny familiana ny valin'ny orinasa.
Marketing amin'ny atiny ho serivisy ivelany - Maherin'ny antsasaky ny orinasa B2B rehetra no namindra ny votoatiny - manakarama ireo matihanina izay manana ny fikarohana, ny famolavolana, ny fanoratana ary ny fahafaha-manao izay mety tsy ho zaka anatiny.
Ny fanampiana marika hyperfocus sy fampiroboroboana ny paikadim-barotra amin'ny atiny amin'ny fantsona sy salantsalany rehetra no asa tiako indrindra amin'ny mpanjifa. Betsaka ny orinasa manana làlan'ny atiny izay tsy manana paikady afovoany hitondrana ny valin'ny orinasa tena izy. ny famafazana ary mivavaha ny fomba fampivoarana atiny (oh: lahatsoratra bilaogy X isan-kerinandro) dia tsy manampy ny orinasanao… fa miteraka tabataba sy fikorontanana bebe kokoa fotsiny.
Aza misalasala mifandray amiko raha mila fanampiana ianao. Nanampy ireo orinasa B2B kely izahay amin'ny alàlan'ny orinasa orinasa hampivelatra ny paikadim-barotra momba ny votoatiny hitondra vokatra azo refesina. Tsy dingana mora izany, nefa mahavokatra tokoa satria ny orinasanao dia afaka manangana tsy fitoviana sy tanjona ao ambadiky ny atiny rehetra novolavolainy, havaozina ary havaozina.
Ity ny sary feno avy amin'ny Digital Marketing Philippines:
Tags: lahatsoratramanam-pahefanab2bmpividy b2bdingana mpividy b2batiny b2bmarketing amin'ny atiny b2bfironana marketing momba ny atiny b2bfironana atiny b2bdia ny mpividymiantso amin'ny asatranomboky atinyContent Marketingcopywritingfampiroboroboanafahazoana mpanjifafijoroana ho vavolombelona momba ny mpanjifafamolavolanamanam-pahaizanafahaizanySary torohaytaratrafmvotoatin'ny mpiara-miasafampisehoana vokatraianarantsika avyfikarohanahaino aman-jery sosialyeritreritra fitarihanafahatokianamendri-pitokisanavirtoaly zava-misytaratasy fotsy
Ahoana ny fomba hanarahana ny fandefasana Elementor Form amin'ny hetsika Google Analytics amin'ny alàlan'ny JQuery
10 Septambra 2013 à 10:49
Tiako ny mizara izany amin'ireo namako ao amin'ny G plus. Azo antoka fa hanampy azy ireo izany. 🙂